Nhoroondo yechitendero cheAmerica: Nguva yekutanga 1600 kusvika 2017
Chitendero & Kunamata Atheism & Agnosticism
VaKaturike vakatanga kusvika rini muAmerica? Pentekosti yakatanga kuve rini? Iko kereke yaJerry Falwell yakagadziriswa rini? Ndeipi Televangelist Oral Roberts akazivisa kuti Mwari "aizomudana kumba" kana asina kukwidza madhora $ 8 mamiriyoni? Zvose izvi uye zvizhinji zvakanyorwa pano.
The 17th Century (1600 kusvika 1699)
KuCape Henry, Virginia, kereke yekutanga yeAnglican (Episcopal) muAmerica makoloni yakasimbiswa.
Purotesitendi yekutanga yeAmerica yeEpiscopal yakaiswa muJamestown, Virginia.
Pasi peutungamiri hwaJohn Robinson, Vachiparadzanisa veChirungu vakatanga kutamira kuNorth America - pakupedzisira, vakazozivikanwa sePilgrim.
Svondo 16, 1620
Mayflower yakasiya Plymouth, England ne 102 maPilgrim aboard. Ngarava yacho yaizouya kuMizincetown musi waNovember 21 uye zvakare kuPlymouth musi waDecember 26.
IVirginia koloni yakagadza mutemo wekutanga wekuAmerica.
Svondo 06, 1628
Purititan colonist akawira Salem ndokutanga Massachusetts Bay Colony
Samuel Skelton akasarudzwa mushumiri wekutanga weSarem, Massachusetts. Sungano yechechi yakasimbiswa na Skelton yakaita kuti ungano yake ive yekutanga isiri kuparadzanisa Chechi yePuritan muNew England.
Roger Williams akatanga kusvika kuNorth America. Aizokurumidza kupokana nemitemo yakasimba yechitendero muMacoloni, zvichiita kuti aendeswe kuRhode Island makore mashanu gare gare.
Ikoko aizosika kereke yekutanga yeBaptist muAmerica.
Dare Repamusorosoro reMassachusetts rakabudisa mutemo wekuti "hapana munhu achazobvumirwa kumuviri wezvematongerwe enyika asi akafanana nhengo dzemamwe machechi mukati memiganhu" yekoloni.
Ichechi yeRoma Katurike yakatora matanho ayo okutanga kuNorth America apo ngarava ye "Colve" ne "Areka" yakauya muMadganis pamwe nevatori vechiKaturike vane 128.
Nhengo dzeboka iri dzakanga dzakasarudzwa naCecilius Calvert, wechipiri Ishe Baltimore uye chikoro chairo chaizotungamirirwa naLobert Calvert, munun'una waIshe Baltimore.
Roger Williams akadzingwa kubva kuMassachusetts. Williams akanga arwisana nematare evanhu nekuda kwemhosva dzechitendero uye, nekuda kwekudzingwa kwake kubva kumakoroni, akaisa guta reVenience uye nekoloni itsva yeRodede Island, kunyanya senzvimbo yokupotera kune avo vanotsvaka rusununguko rwezvitendero.
Svondo 08, 1636
Harvard College (gare gare Yunivhesiti) yakatangwa neMassachusetts Puritans kuNew Towne. Yaiva ndiyo yekutanga yekudzidza yakakwirira yakavakwa muNorth America uye yakatanga kusimbiswa kudzidzisa vashumiri vemazuva ano.
Anopesana nechitendero Anne Hutchinson akadzingwa kubva kuMassachusetts Bay Colony sechirango chekunamata.
Mufundisi weAmerica Kuwedzera Mather akaberekwa.
Svondo 01, 1646
Cambridge Synod ye Congregational Churches yakasangana muMassachusetts, ichifunga nezvehutano hwakanaka hwehurumende iyo yose ye Congregational Churches muNew England inobvumirana kutevera.
Iyo Maryland Assembly yakapfuura Toleration Act, ichidzivirira kuRoma Katurike kupikisa kupurotesitendi kushungurudzwa nekusarurwa, dambudziko raive riri kuwedzera nekuda kwesimba rinokura raOriver Cromwell muEngland.
Nzvimbo yeMaine yakaparadzanisa mitemo yekuumba rusununguko rwezvitendero kune vose vagari venyika, asi pamamiriro ezvinhu apo avo "vanopesana" nechitendero chekutenda vanoita "zvinogamuchirwa."
VeQuaker vokutanga (Mary Fisher naAnn Austin) kusvika kuBoston vakasungwa. Vhiki shanu gare gare vakaendeswa kuEngland.
Vanomwe veQuaker vakasvika kuBoston. Vakabva vasungwa pakarepo nevakuru vePuritan nokuti vaQuaker vaiwanzoonekwa sezvematongerwo enyika uye zvechitendero kupandukira.
Roger Williams akapiwa gwaro rekugadzirisa Rhode Island.
Pazera remakore makumi maviri nemaviri, nyanzvi yezvematongerwo enyika Makrease Mather akava mushumiri weChechi yeBoston's (Congregational). Aizoshumira ikoko kusvikira afa muna 1723.
Massachusetts yakapa mutemo waida kuti mikova yechechi ivharwe panguva yemabasa - zviri pachena kuchengetedza vanhu kuti varege kubva mberi kwemharidzo refu dzapera.
Svondo 28, 1678
Bhuku raJohn Bunyan rakakurumbira rinonzi Pilgrim's Progress rakabudiswa.
William Penn, chiChirungu cheChirungu, akagamuchira charter kubva kuCharles II iyo yakamuita iye wega weimba yeColonial America yePennsylvania.
Mushure memaviri maviri, mitemo miviri mikuru yakabviswa neDare Repamusoro reMassachusetts: rimwe rakarambidza vanhu kubva pakucherechedza Krisimasi uye imwe iyo yakaisa chirango chikuru kune veQuaker vakadzokera kuKoloni mushure mekudzingwa.
William Penn akafamba achibva kuEngland achienda kunzvimbo yePennsylvania.
William Penn, a Quaker uye muvambi wekoloni yePennsylvania, akasaina chibvumirano chakakurumbira nevaIndia vemunharaunda iyoyo. Ichi chibvumirano chakanga chisina kumboputswa neQuakers.
Sarem Witch Miedzo yakatanga apo Tituba, musikana wechikadzi weMurevere Samuel Parris, Sarah Goode, naSara Sarah Osborne vose vakasungwa uye vakapomerwa nouroyi.
Sarem Witch Miedzo muMacoloni colony yakatanga kutongerwa nekutongwa kweTituba, muranda weWest Indian weRev. Samuel Parris.
Bridget Bishop akava wekutanga wevanhu makumi maviri vakaurayiwa nokuda kweupenzi munguva yeSarem Witch Trials.
Gumiguru 03, 1692
MuMassachusetts, Kuwedzerwa Mather kwakabudisa "Mhosva dzehana pamusoro peMweya Inonyangadza," zvichiguma nekugadzirisa Salem Witch Miedzo yakatanga kutanga gore iroro.
Mwanakomana wemakore mana weCotton Mather akafa. Mather, uyo akange akanyora pamusoro pekuvapo kwemadhimoni nemawonerwo enyika munyika, akafungidzira kuti uroyi hunogona kunge hwakanga huri chikonzero chekuzvarwa kwekuberekwa kwake mwanakomana.
Vagari veMassachusetts vaipedza zuva vachitsanya uye vaipfidza nekuda kwebasa ravo mu1692 Salem Witch Trials.
The 18th Century (1700 kusvika 1799)
Mutungamiri weQuaker William Penn akatanga nhungamiro yemisangano yegore negore kune vanhu vemazuva ekutsigira kusunungurwa kubva muuranda.
Jonathan Edwards, mufundisi weAmerica uye mufilosofi, akaberekwa.
Gobind Singh, wegumi Sikh Guru, akafa
Nzvimbo yeSouth Carolina yakapfuura " Svondo Mutemo " iyo yaida kuti munhu wese aende kuchechi musi weSvondo imwe neimwe uye kurega basa rose rakashanda uye achifamba nebhiza kana ngoro kupfuura izvo zvaidiwa zvachose. Vadzvinyiriri vakagamuchira zvakanaka uye / kana maawa maviri mumatanda emumusha.
French Ursuline nuns akatanga kusvika kuNew Orleans ndokugadza nzvimbo yekutanga yeKaturike inobatsira muAmerica, ine nherera, chipatara uye chikoro chevasikana.
Musinagoge rokutanga reAmerica, Sheariti Israel, rakatsaurirwa muNew York City.
MuFiladelphia, Misa yakapembererwa kwekutanga kokutanga kuChechi yaSouth Joseph ndiyo imwe chechi yeRoma Katurike yakavaka uye yakachengetwa muAmerica makoloni pamberi peRevolutionary War.
Anna Lee, muvambi wesangano re Shaker muAmerica, akaberekerwa muManchester, England.
Jonathan Edwards akaparidza mharidzo yake yekare, 'Vatadzi muMaoko eMwari Ane Hasha,' danho rinokosha mukutanga kweNew England's Great Awakening.
Jonathan Edwards akadzingwa kubva pabasa rake semushumiri wekereke ye Congregational muNorthampton, MA.
Akanga aripo kwemakore makumi maviri nemashanu, asi dzidziso yake yepamusoro-soro haina kumbomuka uye nekufamba kwenguva iyo uye kusagadzikana kwayo panyaya dzehutungamiri zvakanga zvanyanya kuwanda kweungano.
Richard Allen, wekutanga mutema akagadzwa muMethodist Episcopal Church, uye muvambi weChechi yeAfrica Methodist Episcopal (AME) , akaberekerwa muranda muPhiladelphia.
Emanuel Swedenborg akafa.
Mutungamiri wechitendero weChirungu Ann Lee neboka duku revateveri vakasvika kuAmerica. Gweta rayo rakazozivikanwa kune vamwe se "Shakers."
IAmerican Army yakatanga kushandisa vadzidzisi, vachiita kuti igova davi rekare kupfuura rimwe remauto mushure me Infantry.
Svondo 02, 1784
Thomas Coke akazvitsaurirwa se "kutanga bhishopu" muChechi yeMethodist Episcopal nemusunguri weMethodisti, John Wesley . Coke akazobatsiridza mukurudziro nekukura kweMethodisti muNorth America.
Richard Allen, wekutanga mutema akagadzwa muChechi yeMethodist Episcopal, akateya Free African Society.
Richard Allen akagadzwa mudhikoni weChechi yeMethodist Episcopal. Allen aizoenderera mberi kundowana kereke yeAfrica yeMethodist Episcopal (AME) uye ave bhishopu wekutanga weAfrica-America muUnited States.
Baba John Carroll vakasarudzwa kuva bhishopi wekutanga weRoma Katurike muUnited States.
Pakati peKrisimasi yekutanga pasi peAmerica mutsva weMitemo, Congress yakange ichitanga. Izvi zvingaita sezvisinganzwisisike nhasi, asi panguva yeKrisimasi yakanga isiri nguva yekurati yechiKristu. Sezvakangoitika, Krisimasi yaiva nemukurumbira wakaipa pakati pevaKristu vakawanda semukana wekusadarika kwechiKristu uye kuparadzana. Pakazosvika 1659 na1681, kupemberera Krisimasi kwakange kusina mutemo muBoston uye mazwi anorwa neKrisimasi muNorth zvakadzivirira zuva kuti rive rezororo renyika kusvika muna 1870.
Richard Allen akatanga nhengo yeAfrica Methodist Episcopal (AME) Chechi.
Richard Allen, wekutanga mutema akagadzwa muMethodist Episcopal Church, akazarura Bheteri African Church.
Nekubatsira uye hutungamiri hwaRichard Allen, wekutanga mutema akagadzwa muMethodist Episcopal Church, Chechi yeAfrica yeMethodist Episcopal (AME) yakasikwa muFiladelphia nevanomwe veMethodist masangano.
Sangano reAfrica Methodist Episcopal (AME) Kereke yakagadza Richard Allen sebhapori wekutanga.
Yezana remakore rechi19 (1800 kusvika 1899)
John Brown, muAmerica aboristist, akaberekwa.
Musangano wekutanga weMethodist unozivikanwa muAmerica wakaitwa muLogan County, Kentucky.
The African Methodist Episcopal (AME) Zion Church yakaparadzaniswa nemubereki wayo, Methodist Episcopal Church.
Brigham Young anoberekwa.
Imwe yemisangano yakakurumbira yemisasa yakaitika kuCane Ridge, Kentucky. Izvi zvinotungamirira ku 'Great Religious Revival yeAmerica West'.
Rabbi Isaac Mayer Wise, muvambi weUniversity of American Hebrew Congregations neHebrew Union College, akaberekwa.
The African Methodist Episcopal (AME) Zion Church yakatangwa muNew York City.
Mary Baker Eddy, muvambi we Christian Science , akaberekwa.
Nhengo dzakasununguka dze Congregational machechi muNew England dzakagadzira American Unitarian Association.
Yokutanga IAmerican Temperance Society yakatangwa muBoston. Izvozvo zvichange zvichitumidzwa zita rokuti American Temperance Union uye yaizova chikonzero chenyika. Mumakore gumi chete pakanga pane vanhu vanopfuura 8 000 vakaita semafungiro emafungiro ane anopfuura 1.5 mamiriyoni nhengo.
Pazera remakore makumi maviri nemaviri, Joseph Smith akatanga kubudisa bhuku rake rainzi "The Book of Mormon."
James Augustine Healy, bhishopi wekutanga weRoma muKaturike muAmerica, akaberekerwa mumunda uri pedyo neMacon, Georgia. Akanga ari mwanakomana wemuiti weIrish uye muranda.
Richard Allen, wekutanga mutema akagadzwa muMethodist Episcopal Church, uye muvambi weChechi yeAfrica Methodist Episcopal (AME), akafa.
Mutungamiri weMormoni Joseph Smith akarohwa, akachengetwa uye ane feather muOhio.
Henry McNeal Turner, bhishopi weChechi yeAfrica Methodist Episcopal (AME), akaberekerwa muNewberry Courthouse, South Carolina.
Temberi yekutanga yeMormon yakatsaurirwa muKirtland, Ohio.
William White, mutungamiri wekutanga weAmerica weAnglican, akafa pazera remakore makumi mana nemana makumi mana. Vhudzi ndiye munhu akaumba izwi rokuti "Chipurotesitendi Episcopal" yechitendero chitsva cheAnglican.
Muevhangeri weAmerica Dwight L. Moody akaberekwa.
Mormon mamishinari akaenda kunotendeukira kuEngland.
Rimwe boka reMormon rakaumba sangano raizoteerera Joseph Smith "muzvinhu zvose" uye "chero zvaanoda." Pakutumidza vainzi Dasikana veZioni, vakazotevedza zita rokuti Vanakomana veDhani.Seboka rakarongeka, rakangoita vhiki.
VaMormon vakarova vasiri maMormon nemakwi munguva yekusarudzwa mudiki kuMustaine guta reGallatin. Vakawanda vasiri vaMormon vakakuvadzwa zvakakomba.
Sezvo kukakavadzana pakati peMormon nevasiri vaMormon kuwedzera, hondo yekutanga ye "Mormon War" muMissouri yakaitika paCrooked River apo LDS yakamanikidza musasa wehurumende yehurumende ndokutora mabhiza akawanda.
Gumiguru 30, 1838
Vakatsamwiswa pamusoro peMormon kuurayiwa kwehurumende yehurumende, nhengo dzemhomho dzakarwisa Haun's Mill, musha wevapoteri veMormon. Varume gumi nemasere nevakomana vakadururwa vakafa.
Gumiguru 31, 1838
Joseph Smith akazvipira kuvakuru veMissinia ndokupomerwa mhosva yekurwisana. Akapona mwedzi mitanhatu mujeri, zvisinei, uye akatizira kuIlinois.
Joseph Smith, apukunyuka kubva mujeri muMissouri, akabatana nevamwe vaMormon muguta reQuincy, Illinois. Smith akazotumidzazve guta racho kuti "Nauvoo," iyo yaiti yaiva chiHebheru che "nzvimbo yakanaka".
Mormoni muItaly yakatanga Nauvoo Legion, gamba rakasununguka rezvematongerwo enyika rakashanda nekudzivirira zvinoda Mormon. Joseph Smith akatumidzwa zita rake mutungamiriri wenyika, wekutanga weAmerica kuti ataure nzvimbo iyo kubvira George Washington.
Muparidzi William Miller weMassachusetts akafanotaura kuti nyika ichaguma musi uyu. Zviri pachena kuti nyika haina kuguma, asi pfungwa dzaMiller dzakatungamirira mukusika kwekereke dzeAdventist muAmerica.
Mutungamiriri weMormoni Joseph Smith akati Mwari akabvumira barika .
Sénata (gare gare Mutungamiri) James Buchanan akaita sarudzo muUnited States Senate kuti United States inziviswa sevechiKristu uye inobvuma Jesu Kristu seMuponesi weAmerica. Chigadziriswa chakarambidzwa, asi vanhu sarudzo dzakadaro dzichazobudiswa mukati memakore anotevera, kusanganisira imwechete ingadai yakashandura Mutemo reMitemo.
Joseph Smith, akapomerwa mhosva yekurudzira mhirizhonga apo vaMormon vakarova mabhizimisi epepanhau vachitsoropodza dzidziso dzake dzakavanzika pamusoro pegoreka, vakatiza kubva kumusungwa.
Joseph Smith uye munun'una wake Hyrum vakasungwa neAlbert authorities. Smith akanga amboedza kushandisa mapurisa eNauvoo kuti adzinge kereke dzevahedheni uye kudzivirira guta.
Joseph Smith nemunun'una wake Hyrum vaitungamirirwa nemhomho yeCarthage, Illinois. Smith ndiye aiva nheyo yeChechi yeMormon uye boka revanhu rakatsamwirwa, muchikamu, pamusoro peSmiss yakagamuchirwa mari yekuroorana.
Brigham Young akasarudzwa kutungamira vaMormon.
Iyo "Kuora mwoyo Kwakawanda" yakaitika apo kudzoka kwaKristu, kwakagara kwataurwa naWilliam Miller, kwakakundikana kuitika zvakare. Vateveri vanenge makumi mashanu vakaora mwoyo vakazodzokera kumakereke avo ekare kana kuti vakasiya chiKristu zvachose - asi vazhinji vakagadzirisa izvo zvaizozivikanwa seAdventist Churches.
MuLouisville, Kentucky, nhengo dzakashata dzeMethodist Episcopal Church dzakaronga Chechi yeMethodist Episcopal, South seSangano idzva.
VaMormon vagari vabva kuNauvoo, Missouri, kutanga kugadzirisa kweWest.
MaMormon akaita nheyo yokutanga yeChirungu muSan Joaquin Valley yeKalifornia.
Chechi yeLutheran - Missouri Synod yakarongwa zvakarongeka.
Boka rokutanga revaMormon vakapinda mairi vakapinda muSalt Lake Valley, iyo iri nharaunda yeMexico panguva iyoyo. Pasina nguva refu, mutungamiri weMormoni Brigham Young akatanga nheyo ye Salt Salt City, Utah.
Brigham Young akazivisa kuChishanu yeChitatu kuti maIndia vemo vaisagona kutendeuka uye kuti yakanga isina hanya "kana vakaurayana kana mumwe Muviri umwe" akazviita.
David C. Cook akaberekwa. Cook yakanga iri nyanzvi yekutanga yeChikoro cheSunday School muUnited States.
Clarence Darrow akaberekwa.
Mutungamiri James Buchanan akasarudza Alfred Cumming kuti atore Brigham Young segavhuna wenharaunda ye Utah.
Mufambiki weMormoni John D. Lee, akatsamwira pamusoro pemutungamiri weButan Buchanan kuti abvise Brigham Young kubva kuhurumende ye Utah Territory, akatungamirira boka reMormoni mukuurayiwa kwechitima cheCalifornia chakasungirwa ngoro ye 135 (kazhinji maMethodist) muMakomo Meadows, Utah.
Svondo 15, 1857
Brigham Young akazivisa mutemo wehondo uye akadzivisa mauto eUnited States kuti apinde muUutah kuitira kuti arege kuzotsiviwa naAlfred Cumming, asiri Mormon, sehurumende yeUtth.
Alfred Cumming, akasarudzwa naMutungamiri James Buchanan kuti atore Brigham Young segavhuna wenharaunda yeUtah, akatora basa. Akakurumidza kuudza mapoka eMormoni akazvidzivirira munharaunda kuti aparadze, asi kazhinji akanga asina hanya.
Hondo yeUnited States yakapinda muSalt Lake City kuitira kuti idzorere runyararo ndokuisa Alfred Cumming (aisingaMormon) segavhuna. VaMormon vagari vaipikisa kushandiswa kwaBrigham Young, uyo akanga ataura mutemo wehondo uye akadzivisa mauto eUnited States kupinda muUtth. Pakanga pane kuparadza kwakaparadzirwa kwakaitwa nevaMormon mhirizhonga pamusoro pemisasa yechando yehondo, asi iyo ndiyo yaive yakawanda yeUnth War.
Charles Darwin's The Origin of Species kuburikidza nekusarudzwa kwetsika yakatanga kubudiswa. Mamwe mapeji 1,250 ezvinyorwa zvekutanga akatanga kutengeswa musi wekutanga.
Mutori wenyika weAmerica uye mutungamiri wechitendero chechihedheni William Jennings Bryan akaberekwa.
Svondo 10, 1862
Rabhi Jacob Frankel akava mufundisi wekutanga wechiJudha muUnited States Army.
Muparidzi anozivikanwa weAmerica Billy Sunday akaberekwa.
Izwi rokuti "MunaMwari Tinovimba" rakatanga kuonekwa pamari yemari yeUnited States - kunyanya, bhandi yemapandi maviri ezana yakabudiswa panguva yeAmerica Civil War.
Mary Baker Eddy, nheyo yeChristian Science, inonzi inoporesa kukuvadzwa kwake nekuzarura Bhaibheri.
Mutungamiri weMormoni Brigham Young akaroora mudzimai wake wechi27 uye wokupedzisira.
Pasi pehutungamiri hweUlysses S. Grant , Congress yakaratidza kuti Krisimasi ndiyo yezororo renyika.
Brigham Young, mutungamiri weMormoni, akasungwa nokuda kwegamamy.
Charles F. Parham akaberekwa. Parham aiva mutungamiri wepakutanga pakati pevaKristu vane shungu muAmerica uye, muna 1898, akatanga nheyo yekudzidzisa Bhaibheri muTopeka, Kansas, uko muAmerican Pentecostal movement yakatanga muna 1901.
Gumiguru 03, 1875
ChiGiriki Union yakatangwa muCincinnati, Ohio pasi pemakambani aRabbi Isaac Mayer Wise. Yaiva yekodhi yekutanga yevaJudha muAmerica kudzidzisa varume kuti vave vaRabhi.
John Doyle Lee, fanatic waMormon, akaurayiwa neuto revanhu vaipfura, Lee akanga aita kuti kuurayiwa kweA Arkansas Methodist kuve mumiriyoni muna 1857. Mu "Mountain Meadows Massacre," motokari yengoro yevane 127 yakafira paMakomo Meadows (pedyo neCedar City), Utah.
Brigham Young akafa.
Frank N. Buchman akaberekwa. Buchman akanga ari mutungamiri wepakutanga wesangano revanhu vevhangeri.
Barika rakarambidzwa neCongress, kunyanya kurongedza maitiro echechi yeMormon.
Salvation Army yakaparadzaniswa; rimwe boka rakarega kuvimbika kumuvaki William Booth apo imwe, inotungamirirwa naBhooth mwanakomana waBhooth nemudzimai wake Maud, vakazvibatanidza se sangano rakasiyana muAmerica muna 1896.
Muparidzi wekuAmerica ainzi Billy Sunday akabata chikwata chake chekutanga chechidiki muChicago. Pamusoro pebasa rake semukurukuri wechitendero akakurumbira, anenge mamiriyoni zana eMamerica anofungidzirwa kuti akapinda mharidzo dzake.
Chechi yeMormon yakarambana necheka.
Svondo 25, 1890
Mutungamiri weMormoni Wilford Woodruff akabudisa maManifesto umo tsika yekarika yakarambwa.
Barika rakarambidzwa neChechi yeMormon.
Aimee Semple McPherson, nheyo yeChina Square Gospel Church, akaberekwa.
Musangano wekutanga weChristian Temperance Union wakaitirwa muBoston.
Svondo 14, 1893
Papa Leo XIII akasarudza Bhishopishopu Francesco Satolli kuti ave wekutanga weApostolic Delegate kuU.SA.
William Jennings Bryan akatumira hurukuro yake inonzi Cross of Gold.
Eriya Mohammed, Mutungamiri WemaMuslim Mutsva. akaberekwa.
Mutsamba yevaapostora Testem benevolentiae, Papa Leo XIII akatonga "kupenga" kwe "Americanism," dzidziso yaaifunga semuedzo weVaAmerican Katurike yekuyananisa dzidziso yeKaturike nemafungiro emazuva ano uye rusununguko.
Kutakura Nation, mutungamiri weAmerican Christian kuzvidzora kufamba, akarova uye akaputsa saloon yake yokutanga mu Medicine Lodge, Kansas.
Yezana Remakore rechi20 (1900 kusvika muna 1999)
Mushure mekufa kwemuvambi Dwight L. Moody, Bhaibheri Institute for Home uye Foreign Mission rakashandura zita rayo kuMoody Bible Institute.
Rabbi Isaac Mayer Wise, muvambi weUniversity of American Hebrew Congregations neHebrew Union College, akafa.
Muparidzi Mutsvuku William J. Seymour akasvika kuLos Angeles ndokutanga misangano yezvemumutsiriro. Iyi "Azusa Street Revival" iyo yaizokura paAposstolic Faith Mission iri pa 312 Azusa Street muLos Angeles yaiva chinhu chikuru mukukudzidzira kweAmerican Pentecostalism.
The Azusa Street Revival, iyo mission yakagadzirisa nexus yeAmerican Pentecostal movement, yakatanga zvakatanga apo machechi echitendero akatungamirirwa nemuevhangeri mutsva William J. Seymour akatamira muchivako paAzusa Street muLos Angeles, California.
Nezvinyorwa zveshoko reapositori Sapienti consilio, Papa Pius X akaita kuti American Catholic Church isarega kuva "chechi yemamishinari" iri pasi pekutungamirirwa kweChechi yePropaganda Fide. Zvino, yakanga yakazara nhengo yeRoma Katurike .
Aimee Elizabeth Semple, uyo akazowana gare gare chechi yeAsquare Evhangeri, akagadzwa kuushumiri muChicago nemurume wake Robert Semple.
Nhoroondo dzokutanga dzakanyorwa muAmerica yemapoka achitaura nendimi dzakaitika muLos Angeles pasi peutungamiri weevhangeri mutsva William J. Seymour. Ichi chiitiko chakaratidza kutanga kwemakore matatu e "Azusa Street Revival," chinhu chikuru mukusimudzika kwePentecostalism .
ChiKristu Chiedza Society of Missouri, mutungamiri wekutanga weAmerican Religious Right, akatanga chirongwa chekurambidza mafirimu anoratidza kutsvoda pakati pevasina hama.
L. Ron Hubbard, munyori wenyanzvi-wenhema uye nheyo yeScientology , akaberekwa.
IAssemblies of God yechitendero yakasimbiswa pagungano rezuva regumi nemasere muHot Springs, Arkansas.
Henry McNeal Turner, bhishopu weActric Methodist Episcopal (AME) Chechi, akafa muWestern, Ontario, Canada
Billy Graham akaberekwa.
Isaac Asimov akaberekwa.
Kadhidine John O'Connor akaberekwa.
Gumiguru 19, 1921
Bill Bright, nheyo yeCampus Crusade yaKristu, akaberekwa.
Mushure mokurambana kwekunetseka, muevhangeri weAmerica Aimee Semple McPherson akamusiya sangano reAsemblies of God.
Inyika yeChechi yeEvhangeri yeChina yakatangwa.
Svondo 15, 1923
Mukuedza kupikisa mabasa emagandanga eKu Klux Klan, Gavhuna John Calloway Walton akaisa Oklahoma pasi pemutemo weuto.
Pamusangano muMadganis, General Conference yeMethodist Episcopal Church yakabvisa kurambidzwa kwekutamba uye kutamba kwemaitirwo emachechi.
Phyllis Schlafly akaberekwa.
Gumiguru 08, 1924
Pamusangano muNew York City, Musangano weNational Lutheran wakarambidzwa kutamba mumhanzi we jazz mumachechi eko.
John Scopes akasungwa nekuda kwekudzidzira kushanduka muZuva rake, Tennessee, kirasi yepamusoro yezvidzidzo zvechikoro.
Florida yakapfuudza mutemo unoda kuverengwa kweBhaibheri zuva nezuva mune zvikoro zvose zvevanhu.
Pazera remakore makumi maviri nemaviri, muevhangeri weAmerica Aimee Semple McPherson akanyangarika paaifamba kugungwa. Akadzokorora vhiki shanu gare gare, achizviti akabatwa uye akabatwa musungwa, asati agona kupukunyuka.
William Jennings Bryan akasvika muStotton, Tennessee, zuva rakatarisana neE Scopes Monkey Trial raitanga.
Iyo yakaipa inonzi Scopes Monkey Trial yakatanga muRhea County Courthouse yeDiston, Tennessee.
Iyo yakaipa "Kutamba KweMonkey" yakapera uye John Scopes akawanikwa ane mhosva yekudzidzisa Darwinism.
Mutori wenhau weAmerica uye mutungamiri wechitendero chechipiri William Jennings Bryan akafa.
Svondo 16, 1926
Robert H. Schuller akaberekwa.
Pakutanga yakatangwa nemuevhangeri Aimee Semple McPherson muna 1923, International Church yeVhesi yeAinesquare yakaiswa mutemo muLos Angeles, California.
Muterevhizheni weAmerica Pat Robertson akaberekwa.
Haile Selassie akashongedzwa korona wemambo weEthiopia, nokudaro achizadzisa vanhu vazhinji uporofita hwave hunova musoro wekona weRastafarianism.
Svondo 13, 1931
Achiri kudzoka kubva pakuvhunduka kwekutya, Foursquare Evhangeri muvakidzani Aimee Semple McPherson akaroora David Hutton; vakarambana makore mana chete gare gare.
Musasa wekutanga weNazi wekuNazi wakagadzirirwa kuDachau.
Felix Adler, muvambi weEthical Culture movement, akafa muNew York City.
Jerry Falwell akaberekwa. Falwell mutungamiri akakurumbira muAmerican Religious Right uye akabatsira kuwana Moral Majority muna 1979.
Carl Sagan akaberekwa.
Charles Edward Coughlin akatanga nhengo ye National Union for Social Justice (Union Party).
Televangelist Jimmy Swaggart akaberekwa.
Alcoholics Anonymous yakatangwa muAkron, Ohio.
Pius XI akapa hurukuro kune mabhishopi eAmerica ane musoro unoti "Pamifananidzo inofamba"
Chechi yeKaturike Katurike yakagadzirisa yekutanga Native American, Kateri Tekakwitha.
Mushure mokuparadzaniswa kwemakore 109, Methodist Episcopal Church muUnited States yakabatana. Chechi yeMethodist Protestant yakanga yaparara muna 1830 uye Chechi yeMethodist Episcopal, South yakaparadza muna 1844.
Louis D. Brandeis, dare guru rekutanga reJudhiya, Justice, akafa pazera remakore 84.
John Ashcroft, Attorney General weUnited States, akaberekwa.
Svondo 27, 1944
Aimee Semple McPherson, nheyo yeChechi yeAine-Square Evhangeri, akafa.
Israeri yakanga yakasimbiswa zvakagadziriswa sehurumende yakazvimiririra.
Mutemo weIndia wakapedza boka re "untouchable", rakaderera pane dzose dzekare dzeHindu dzakagara nhaka.
Svondo 30, 1951
Billy Graham's "Hour of Decision" purogiramu yakatanga kutanga pa ABC.
Jerry Falwell akaparuka kubva kuchechi ndiye akaponeswa uye akatanga Thomas Road Baptist Church, kereke yaanoenderera mberi.
Ellery Schempp, achipikisa kuverengerwa kuverenga kwemavara kubva muBhaibheri muchikoro chake chepachikoro chevanhu, akasarudza kuverenga ndima kubva muKorani panzvimbo yeBhaibheri; iyo yakaita kuti ave nerwendo kuenda kuhofisi yemukuru. Iye nemhuri yake vaikumbira rubatsiro kubva kuAmerican Civil Liberties Union, vachitanga nyaya yeSchool School yeAbington Township v. Schempp . Pakupedzisira, Supreme Court yakatonga kuti maitiro echitendero akadaro aisabvumirana nemutemo.
Ungano ye Congregational Christian neEvangelical neReformed Church yakabatana, ichiumba United Church of Christ (UCC).
The John Birch Society yakatangwa.
The Unitarian Church neChechi yeUstistist vose vakabvumira kuti vawirirane mune imwe sangano.
Musi waMay 23, 1959
Shunryu Suzuki akauya kuSan Francisco, uye pamusoro pemakore akatevera akaunza tsika yakarurama yeZen Buddhist kuUnited States.
Iko 100th General Assembly yeSouth Presbyterian Church (PCUS) yakapedza chisarudzo ichizivisa kuti hukama hwepabonde mumamiriro ekuroorana asi pasina chinangwa chokubata vana vakanga vasina chivi.
Madalyn Murray (gare gare O'Hair) akaisa chikwata kuBaltimore kuti amanikidze kuguma kwekudiwa kweBhaibheri kuverengerwa nekudzokororwa kweMunyengetero waShe mune zvikoro zvevanhu.
Iyo Christian Broadcasting Network, yakatangwa uye inotungamirirwa naPat Robertson, yakatanga kupararira pamusoro peredhiyo.
Iyo Christian Broadcasting Network, yakatangwa uye inotungamirirwa naPat Robertson, yakatanga kuparidzwa paTV.
Archbishop Joseph Francis Rummel weLouisiana akarayira zvikoro zvose zveRoma Katurike muNew Orleans diocese kuti ipedze mitemo yavo yekusarura kwemadzinza.
Dare reManchester Court of Appeals rakatonga 4-3 kuMadalyn Murray (akazotevera O'Hair) mumhosva yake kuti asamanikidze kuguma kwekuverengerwa kweBhaibheri kunodiwa nekudzokororwa kweMunyengetero waIshe mune zvikoro zvevanhu vose.
Helmut Richard Niebuhr akafa pazera remakore 67.
Elizabeth Ann Seton weNew York akashandurwa naPapa John XXIII.
Dare rinodzora guru reChechi yeUnited Presbyterian rakarondedzera kuti rinopesana neminyengetero inogamuchirwa mumasangano ehurumende , mitemo yekuvhara kweSvondo, uye ropafadzo dzepamusoro dzakapiwa makereke maviri uye vafundisi.
Congress yakakavhiringidza kuchinjwa kweChristian Rights Act muna 1963 iyo ingadai yakabvisa kuchengetedzwa kwezvidziviswa pakusarura kwechitendero kune vasingatendi. Yakagadziriswa neOhio Republican John Ashbrook, kuchinjwa kwakanyorwa kuti: "... hazvizove kusingabvumirwi nemutemo basa rinoshandiswa kune mushandirwi kuramba kubhadhara uye kushandisa chero munhu chero upi zvawo nekuda kwevanhu vakataura 'maitiro asina Mwari uye zvitendero.' Iko kuchinjwa kwakapiwa neImba yeVamiririri, 137-98, asi yakakundikana kupfuudza Senate.
World Heavyweight chamakumbo ebhodhi akazivisa kuti akanga achibatana neRudzi rweIslam uye kuti zita rake idzva raizova Cassius X. Gare gare, aizoshandura zita rake kuti Mohammad Ali.
Malcolm X akasununguka kubva kune Nation of Islam.
Pakazosvika gore rino Jerry Falwell akapfuurira kurambidza vatungamiri vekodzero dzevanhu, kunyange akataura kuti akachinja pfungwa dzake nezvekusarura uye kusarura mumashure ekuma1960.
Malcolm X akaurayiwa neVaMuslim vatatu vaMidzimu paakanga achitaura nevateereri muHarlem, New York City.
Vatatu vechechi yeUnitedarian vashumiri vanobatanidzwa mukuratidza kodzero dzevanhu mumigwagwa yeSelma, Alabama, vakarohwa nemhomho. Mumwe, Rev. James J. Reeb, akafa gare gare mune chimwe chipatara cheBirmingham, Alabama.
Muhurukuro yakabudiswa mumagazini e-weekly "Christianity & Crisis," chirevo chakasinwa nevashumiri 16 vakakurumbira vePurotesitendi vakataura kuti maAmerica mazano muVietnam akatyisidzira "mukana wedu wekushandira pamwe neSoviet Union kuti tive norugare muAsia."
Uyu waiva musi weChishanu wekupedzisira apo maAmerican maRoma Katurike aifanira kurega kudya nyama. Kuchinja kwacho kwakange kune chirevo chakaitwa naPapa Paul VI pakutanga kwegore iroro.
Jerry Falwell akasika chikoro che "Chikristu" chakatsaurwa kuti chidzivirire chikoro chevanhu vese chechikoro. Somugumisiro, Falwell akazvidzwa nevamwe vatungamiriri vechitendero.
Israeri yakatanga kurwisa kwokutanga kweEjipiti nedzimwe nyika dzeArabhu. Munguva yehondo yezuva rechitanhatu, iyo yakasvika pakuzivikanwa seHondo Yemazuva matanhatu, Israeri yakabata Sina Peninsula, Gaza Strip, uye West Bank yeJorodhani Rwizi.
Jerry Falwell's Thomas Road Baptist Church yakagadziriswa.
Chechi yeZvenyika Yose yakava chechi yekutanga yeWiccan kuiswa muUnited States.
MuDallas, yeMethodist uye Evangelical United Brethren machechi akabatana kuti agadzire United Methodist Church, achiumba wechipiri mukuru wechitendero chePurotesitendi muU.SA.
Pashure pemakore 140 ekusarura kusina kufanira, Chechi yeMormon yakaratidza pachena kuti vanhu vemazuva vaisagona kuva vaprista "nekuda kwezvikonzero zvatinotenda kuti tinozivikanwa kuna Mwari, asi izvo zvaasina kuzivisa zvizere kuvanhu."
Mufundisi wechipurotesitendi Reinhold Niebuhr akafa ava nemakore 78 muStockbridge, Massachusetts.
Jerry Falwell akagadza Lynchburg Baptist College, akazotumidzwa zvakare kuti Liberty Baptist College.
Mufundisi William Johnson anova munhu wekutanga wepabonde akaiswa pachena mune imwe sangano rechiKristu: United Church of Christ.
Gallup yakaratidza kuti 64 muzana yevanhu vose uye 56 muzana yeRoma Katurike muAmerica vaida kusiya chirevo pamusoro pokubvisa pamuviri kune mukadzi uye chiremba wake.
Sangano re Securities and Exchange Commission rakapa Jerry Falwell's Thomas Road Baptist Church ne "unyengeri nekunyengedzera" mukubhadhara $ 6,5 mamiriyoni muzvisungo zvechechi zvisingaverengeki. Falwell akabvuma kuti SEC yaiva "technically" yakarurama, asi biography ye Falwell yakanyorwa nevashandi vake yaiti kereke yake yakakunda sutu uye yakabviswa pamhosva. Iyi inhema uye mari yechechi yakaiswa zvirokwazvo mumaoko evanhu vashanu vebhizimisi vemunharaunda kuti vagadzirise nyaya.
Musi waJanuary 22, 1973
Akasarudza: Roe v. Wade
Ichi chisarudzo chinokosha chakasimbisa kuti vakadzi vane kodzero yekutanga kubvisa pamuviri. Nenzira dzakasiyana-siyana, Dare Repamusorosoro rakagadzira pfungwa yokuti Mutemo-soro unodzivirira munhu kuvanze, kunyanya pazvinosvika panyaya dzine chokuita nevana nekuberekwa.
Sangano reNational Council of US Catholic Bishops rakazivisa kuti ani naani ari kuita kana kubvisa pamuviri angazobudiswa kubva muRoma Katurike.
Svondo 04, 1973
IAssemblies of God yakazarura chikoro chekutanga chechikoro cheSchoolfield, Missouri. Uyu waiva wechipiri wePentecosti yechikoro chebhaibheri muUnited States, uye wekutanga akazarurwa muTulsa, Oklahoma neOr Roberts.
Pasi pekutungamirirwa kwaJim Bakker, kambani ye PTL yakatanga kuparidzira muUnited States.
Yunivhesiti yeNaropa muBoulder Colorada yakanga isingazivikanwi nemudzidzisi weTibetan Chogyam Trungpa uye Alan Watts. Iyo yaizova yekutanga yunivhesiti yakagamuchirwa yeBuddhist Studies muUnited States
Svondo 14, 1975
Elizabeth Ann Seton akashongedzwa naPaul Paul VI.
Svondo 16, 1976
Episcopal Church inobvumirwa nekugadzwa kwevakadzi sevapristi uye mabhishopi.
John Nepomuceno Neumann akashandurwa naPope Paul VI, achiva wokutanga muAmerica akaberekerwa vatsvene. Neumann aiva Bishop wechina weDhiodelphia Diocese uye chinonyanya kukosha pamusoro peAmerican Katoliki angave ari kusikwa kwechikoro chechikoro.
Papa Pauro VI akabvisa kusunungurwa kwekutsvaga kwekuzvidzivirira kwakagadziriswa pavakarambana neveAmerican Katurike vakaroora zvakare. Iyi chirango chokudzingwa chakatanga kupiwa nePlenary Council yeAmerican Bishops muna 1884.
Chechi yeMormon yakagumisa chirongwa chekusarura kune vaAfrica-America. Pashure pemakore 148, vatema vakazobvumirwa kushumira sevatungamiri veMweya.
Joseph Freeman Jr. akagadzwa semuprista wekutanga weMormon wekutanga.
John Paul II akasarudzwa papa.
Ayatollah Ruhollah Khomeini akabata simba muIran.
Jerry Falwell akashandurwa nevarwi vezvakaitika kare veHoward Phillips, Ed Mcatee, naPaul Wenrich kuti vagadzire uye vatungamirire Moral Majority. Chinangwa chavo ndechekuunza vaPurotesitendi vanodikanwa kuRepublican Party mune tariro yekukundisa Jimmy Carter mumasarudzo ehutungamiri gore rinotevera.
Linda Joy Holtzman akava murabi weungano yeCenservative Beth Israel muCoatesville, Pennsylvania. Saka akanga ari rabhi wechikadzi kuti atungamirire ungano yechiJudha muU.SA.
Jerry Falwell akapinda mumunamato wekunamatira pamunamato we White White naJimmy Carter. Falwell aizotaura, asina kururama, kuti akabvunza Carter kuti nei pane "akazivikanwa kwazvo kuita zvechanikodhi" kune vashandi vake uye akagamuchira mhinduro iyo Carter akazviti iye purezidhendi wevanhu vose.
Usiku huno, William Murray (mwanakomana weAmerican asingatendi kuna Mwari, Madalyn Murray O'Hair) akarota hope yaakadudzira sechitendero chekunamata kubva kunaMwari, zvichiita kuti atendeuke kune mararamiro echiKristu echiKristu. Akarega kunwa uye kusvuta uye akabatanidzwa mukuedza kusakoshesa kupatsanurwa kwechechi nehurumende iyo amai vake vakanga vagara vachitsungirira.
Mutungamiri wechiIjipita Anwar Sadat akaurayiwa nevaIslam.
Rev. Sun Myung Moon, nheyo uye mutungamiri weChechi yeUnited, anowanikwa ane mhosva mumatare ehurumende ane zvikamu zvina zvakasiyana zvekubhadhara mutero wemari.
Murevere Sun Myung Moon, weUnited Church akaroora 2,075 vakaroorana kuMadison Square Garden. Vakawanda vevakange vachangobva kuchata vakanga vasingazivi zvakakwana kune mumwe.
Rev. Sun Myung Moon akatongerwa mwedzi 18 mujeri nokuda kwekubiridzira kwemitero nekudziviswa kwekutonga.
Chechi yePresbyterian (USA) yakasikwa muAtlanta, Georgia, kuunganazve kwenguva yakareba-yakaparadzanisa Chechi yeUnited Presbyterian (UPCUSA) uye Southern Presbyterian Church (PCUS).
Mufundisi Jerry Falwell akatsanangura AIDS se "gay plague".
Southern Baptist Convention yakapedza sarudzo pamusoro pekugadza vakadzi muBaptist Baptist.
Jerry Falwell akamanikidzwa kubhadhara mutori wenhau wegayari Jerry Sloan $ 5,000 mushure mekurasikirwa nedare rehondo. Munguva yehurukuro yeTV muSarramento, Falwell yakaramba nhema dzinonzi Metropolitan Community Churches "yakashata" uye "mhirizhonga uye Satani" iyo "rimwe zuva richaparadzwa zvachose uye kuchava nekupemberera kudenga." Apo Sloan akasimbisa kuti aiva netapepi, Falwell akavimbisa $ 5,000 kana achikwanisa kuzvigadzira. Sloan akaita, Falwell akaramba kubhadhara, uye Sloan akabudirira kubudirira. Falwell akakumbira, uye gweta rake achitaura kuti mutongi wechiJudha munyaya yacho akanga asina hanya. Falwell akarasikirwa zvakare uye akamanikidzwa kubhadhara $ 2 875 muzvimirango uye mari yematare.
Mishumo inobva kuFederal Election Commission inoratidza kuti Jerry Falwell's "I Love America Committee," sangano rezvematongerwe enyika rakagadzirwa muna 1983, raifamba. PAC yakasimudza $ 485,000 mugore rayo rokutanga asi yakashandisa $ 413,000 pabasa iri.
MuUnited States, Rabbinical Assembly yeChristian Conservative yakaratidza kuti yaizotanga kubvuma vakadzi sevaRabhi.
Jerry Falwell akakumbira ruregerero kune boka rechiJudha nekuda kwe "Christian" America. Kubvira ikozvino, akavimbisa, aizoshandisa izwi rokuti "Judao-Christian" America.
Karen Ann Quinlan, shamwari kubva muna 1976, akafa pazera remakore 31 mushure mekunge dare rakabvumira kubviswa kwemhepo.
Jerry Falwell akabata musangano wezvepepanhau muWashington, DC, kuitira kuzivisa kuti akanga achichinja zita reMoral Majority kuRuberty Foundation. Iri zita idzva harina kumbobatwa uye rakasiyiwa nguva refu.
Baba Charles E. Curran, nyanzvi yezvemitemo paKaturike University of America muWashington, DC, yakaratidza kuti Vatican yakanga yamupa chirevo chekuita: kuratidzira maonero ake pamusoro pekuberekwa kwekuberekwa, kurambana, nedzimwe nyaya dzine chokuita nekuita zvepabonde, kana kurasikirwa nechiremera dzidzisa dzidziso yeRoma Katurike. Zviuru zvekupikisa izvi zvekupedzisira uye Curran vakaramba kudzorera; pakupedzisira, Vatican yakabvisa chibvumirano chake chekudzidzisa semudzidzi wechitendero cheKaturike uye muna 1987 akambomiswa kubva kuCatholic University.
Televangelist Oral Roberts akazivisa kuti Mwari akanga amuudza kuti aizodanwa "kumba" kana asina kukwira madhora $ 8 mamiriyoni pamusi waMarch 31 wegore iroro. Mari iyi yaifungidzirwa kuti iite basa roumishinari munyika dzisina kudzivirirwa uye chikumbiro chakanga chakabudirira-kukanganisa kweDH $ 1 mamiriyoni kwakagadzirwa kumusi wekupedzisira naJerry Collins, muFlorida racetrack owner.
Jim Bakker akasarudza semutungamiri wehutano hwePPL mushure mekuzarurwa kweshoko rezvepabonde ra1980 rine munyori wechechi, Jessica Hahn.
MuColumbus, Ohio, mapoka maduku matatu echiLutheran akabatana kuti aumbe Evangelical Lutheran Church muAmerica (ELCA), achiva sangano guru reLutheran muUnited States Rakanga risina kuiswa mutemo, kunyange zvakadaro, kusvikira gore rakatevera.
Televangelist Oral Roberts akataura kuti akanga amutsa vanhu vakawanda kubva kuvakafa.
Mutungamiri Reagan akasarudza jurist rekuchengetedza hurumende Robert Bork kuti atore nzvimbo yepamusoro-soro Justice Justice F. Powell Jr. Muna Gumiguru, Sangano reSenate Judiciary Committee rakasarudza 9 kusvika ku5 pakurwisana nekusarudzwa uye Sénate yose yakazoita saizvozvo.
MuNew Hampshire, dare reUnited Methodist Church rakamisa Rose Mary Denman, mushumiri wevabatsiri, nokuti akaputsa mutemo wechechi wairambidza kuita ungochani kubva kuva vafundisi.
Jamie Dodge we Mississippi akadzingwa kubva kubasa rake paSalvation Army nokuti akanga ari Pagani. Akazopa sarudzo pamusoro peSalvation Army nokuda kwekusarura kwechitendero uye akakunda.
Sangano reElectoral Election Commission rakapa $ 6,000 chakanaka kuJerry Falwell nokuti akaisa mutemo wemhirizhonga $ 6.7 mamiriyoni mumari yakagadzirirwa ushumiri hwake hwechitendero kune zvakasiyana-siyana zvematongerwo enyika.
Pat Robertson akazivisa kuti aizotsvaka kusarudzwa kweRepublican kumutungamiriri wenyika.
Jerry Falwell akazivisa kuti ainge asara semukuru weMoral Majority, achibva kune zvematongerwo enyika zvakakwana, nokuti aida kupedza nguva yakawanda neThomas Road Baptist Church muLynchburg, Virginia, uye nehuterevhizheni yake.
Kutaurirana: Lyng v. Northwest Indian CPA
Nevhoti 5-3, Dare Repamusorosoro raizobvumira mugwagwa kuvakwa kuburikidza nenyika tsvene dzeIndia. Dare rakabvuma kuti mugwagwa waizove wakanyanya kuparadza tsika yavo yechitendero, asi wakawana kuti izvi zvinosuruvarisa.
Jerry Falwell akatsiva Jim Bakker paTV yeTV.
IEvangelical Lutheran Church muAmerica (ELCA) yakaiswa mumutemo.
Munguva yekugara kweTV, televangelist Jimmy Swaggart akabvuma kuti akanga ashanyira hupombwe uye akazivisa kuti aizosiya ushumiri hwake kwenguva refu isingazivikanwi. MunaMuvhuro wegore irorochete veAssemblies of God vesangano rakamusunungura ndokumuraira kuti arambe ari paTV, asi akadzoka nekukurumidza.
Dare Repamusorosoro reUnited States rakatonga 8-0 kuti Jerry Falwell aisagona kuunganidza mhirizhonga yeparadhiso yakawanikwa mumagazini yeHustler .
Televangelist Jimmy Swaggart akadzingwa neAssemblies of God mushure mekunge zvaratidzwa kuti aibatanidzwa nehure. Swaggart akarayirwa kuti arambe ari paTV kwegore asi akadzoka chero zvakadaro pashure pemwedzi mitatu chete.
Ungano yeUnited Methodist yakaramba zvachose chirevo kana kukosha kwepluralism apo, panguva yeGeneral Conference muSt. Louis, Bishop Jack Tuell akazivisa "Nguva yasvika yokuti ichitaura maitiro ekupedzisira pamusoro pokuti pfungwa yekufananidza yeUnited Methodist teolojia ndiyo yakawanda . " Ichi chaingova chimwe chemienzaniso mizhinji yemapoka echiPurotesitendi muAmerica achitendeukira kune mamwe maitiro ezvidzidzo, zvehutano, uye zvematongerwo enyika.
Martin Scorsese's "The Last Temptation of Christ" inotanga kupararira kumhan'ara nekupikisa pamusoro pekunyomba kwayo.
Dare guru rezvematongerwo enyika rakapa Jim Bakker mhosva yekunyengera kwemashoko uye kurangana kubiridzira vanhu kuburikidza nokutengeswa kwezviuru zvehupenyu hwehupenyu hwehupenyu hwe PTL theme park, Heritage USA
Akasarudza: Dodge v. Salvation Army
Zvingaita here masangano ezvitendero anogamuchira hurumende, hurumende, uye hurumende yekubhadhara mari inosarura vanhu vane chitendero chavasingadi? Dare reruwa reMississippi rakatonga "kwete," richiwana mutsigiri wechihedheni uye neSalvation Army.
Jerry Falwell akazivisa kuti Moral Majority aizobvisa uye akavhara mahofisi ayo.
Mufundisi George A. Stallings, Jr., mutema weRoma muRoma Katurike, akasiya mitemo yeAkishopu wake uye akaumba sangano rekuAfrica-America reKaturike muWashington, DC Stallings yakataura kuti akanga asiri kuisa chechi schismatic asi panzvimbo achiedza kugadzira nzira yekunamata iyo yaive yakanakira zvinodikanwa nevaKaturike vemadzinza. Pasinei neizvi, aizotaura zvakare kuti Imani yake yeTemberi yakanga "isisiri pasi peRoma" uye yaizobvumira zvinhu zvakadai sokubvisa pamuviri, kurambana, nekugadzwa kwevakadzi. Izvo, maererano neVatican, yakadzingwa kubva kuStallings.
Kudzvinyirirwa kwaJim Bakker uye kurangana kwepamberi kwakatanga.
Panguva yekutongwa kwake nekunyengedza uye kurangana, Jim Bakker akatambura kuparara muhofisi yake gweta.
Jim Bakker akatongerwa kushandisa terevhizheni yake kubiridzira vateereri vake.
Jim Bakker akatongerwa makore makumi maviri mujeri uye akabhadhara $ 500 000. Vakawanda vakafunga kuti kutonga uku kunonyanya kuoma uye, muna 1991, mutongo wake wakaderedzwa kusvika makore gumi nemasere uye akasunungurwa pahurukuro pashure pemakore mashanu ari mujeri.
Gumiguru 31, 1989
Vakakavhiringidza: Jimmy Swaggart Ministries v. Bhodi yekufananidza kweCalifornia
Masangano echitendero anofanira kunge asingabhadharwi nemitero nokuti kukohwa kwemitero iyi kunotyora zvose Mahara Okudzidzira uye Mavambo Ekugadzirisa Kwekutanga?
MuNew York, Bhishopi Mubatsiri Austin Vaughn akazivisa kuti Gavhuna weNew York Mario Cuomo, muKaturike, akanga "ari pangozi yekuenda kugehena" nokuti aifunga kuti kubvisa pamuviri kwaiva chinhu chehana yevakadzi.
Mune pepanhau reKatorike yeNew York, Kadhidhendi John O'Connor akanyora kuti: "[Ini] simba reChechi rinorambwa pamubvunzo wakakosha sehupenyu hwehupenyu [mukukakavadzana pamusoro pekubvisa pamuviri], ... ipapo mibvunzo yeUtatu inova kutamba kwemwana, sezvinoita unamwari hwaKristu kana imwe dzidziso yeChechi. "
Vakakavadzana: Chechi yeLukumi Babalu Aye v. City of Hialeah
Apo nyaya iyi yakasarudzwa, Dare rakabvumirana nemitemo yeguta risina kubvisa zvibayiro zvemhuka.
Mushure mekusarudzwa kwaBill Clinton semutungamiri wehurumende, Jerry Falwell akatuma tsamba yekusimudzira mari yekukumbira vanhu kuti vhote kana achifanira kugadzirisa zvakare Moral Majority. Gare gare iye aizoramba kuratidza kuti mari yakawanda sei, achingoti vatori venhau havana chinangwa chokugadzirisa sangano rake rekare.
IInternal Revenue Service yakawana kuti mari kubva kuJerry Falwell's Old Time Gospel Hour yakagadziriswa zvisina kutenderwa kukomiti yezvematongerwe enyika. I IRS yakapa $ 50,000 yakanaka pa Falwell uye yakashandura Old Time Gospel Hour yechirongwa chekubhadhara mitero ye 1986-87.
Bhodha Doro, Fodya uye Zviputi (ATF) pamwe chete neFBI nedzimwe nhengo dzezvematongerwo enyika dzakagadzirira kuparadza Dhipatimendi rebazi re Davidian paWaco, Texas.
Pasinei nechipikirwa chekare kumapoka echiJudha kumira kureva America se "chiKristu" rudzi, Jerry Falwell akapa mharidzo inotaura kuti "hatifaniri kubvumira vana vedu kukanganwa kuti iri rudzi rwechiKristu.Tinofanira kudzorera zvakakosha zvedu . "
Michael Griffin akauraya ndokuuraya Dr. David Gunn muPensacola, Florida. Uku ndiko kwaiva kuponda kokutanga kwekupa pamuviri muperekedzi nemunhu anoramba kubvisa pamuviri.
Hondo itsva yeAATF pabazi re Davidian muWaco, Texas, inotungamirira kumoto wakauraya vanhu 72-86, kusanganisira mutungamiri Davidian David Koresh.
Mufundisi Paul Hill akapfura ndokuuraya Dr. John Britton, mupiro wekubvisa pamuviri.
Sangano reAmerica echiHebheru, sangano rehurumende reRussia reAmerica muAmerica, rakataridzirwa uye rakarambwa (nerutivi rukuru) kubvunzwa kwehutano hunoendeswa neChechi Beth Adam kuCincinnati. Iyi sinagogi yakanga yabvisa zvose zvinyorwa kuna Mwari mubasa rayo, nekutsanangura kuti nhengo dzayo dzaifarira kutsvaga maJuda avo uye mazita avo pasina kusamanikidzwa kuvimba nezvinofungidzirwa neaist.
Southern Baptist Convention, musangano weAtlanta, yakakumbirisa ruregerero kune veAfrica -America "yekuremekedza uye / kana kupfuurira humwe hwevanhu uye zvehutongi muhupenyu hwedu" uye vakapfidza nokuda kwe "tsandanyama yatave tine mhosva, kana tichiziva kana kuti tisingazivi."
Rev. Jeanne Audrey Powers, mutungamiri akakurumbira muUnited Methodist Church, akava nhengo yepamusoro-soro yedhechi iyo kuzivisa kuti aive gayari. Maererano nePower, akatora danho iri se "chiito chekudzivisa vanhu dzidziso dzenhema dzakakonzera kupesana uye kuvimba kwevanhu mukati mechechi pachako."
Molly Marshall, mukadzi wokutanga kuti awane upfumi pa Southern Baptist Theological Seminary muLouisville, Kentucky, akamanikidzwa kusiya basa mushure mokupomerwa kwekusimudzira dzidziso dze liberal.
Nemhaka yekukakavadzana uye kutaura kwemaonero pamusoro pekudzidzisa zvepabonde uye kushungurudza doro, US Surgeon General Joycelyn Elders anomanikidzwa kutendera basa rekurega basa.
MuEcyclical Evangelium Vitae, Papa John Paul II akarayira vese veKatorike, vatongi, uye vezvematongerwo enyika kuti vateerere dzidziso yeVatican muzvisarudzo zvavo uye mavhoti: "Munyaya yepamutemo mutemo usina kururama, wakadai semutemo unobvumira kubvisa pamuviri kana euthanasia, haambobvumirwi kubvuma kuuteerera, kana kuti kubatanidzwa mumushandirapamwe weparaganda mukuda mutemo akadaro, kana kuti kuvhota. "
IAACLU yakaisa mhosva pamusoro peMhosva Moore, ichirayira kuti kuratidzwa kwake kweMirairo Gumi uye tsika yake yekuisa dare remhosva nemunyengetero, kuputsa Ikokutanga Amendment.
Svondo 28, 1995
Yasser Arafat uye Gurukota reIsrael Yitzhak Rabin vakasayina mutemo unotumira kutonga kweWest Bank kuPalestine.
Chitendero Muzvikoro Zvose: Kuvandudzwa kwebumbiro reUnited States rakaendeswa kumusangano neChiratidzo Ernest Istook (R-OK). Yakaparadzanisa kuparadzana kwetsika kwechechi nehurumende kuburikidza kubvumira munyengetero wakarongeka wechikoro mumasangano ehurumende. Kushandurwa kwake kwaiva nekutsigira kweChristian Coalition uye mamwe maitiro echiKristu anochengetedza, asi yakagamuchirwa zvikuru neyemamwe mapoka evanhu vechiKristu vaikoshesa kuparadzana kwechechi.
The Christian Coalition yakasika "Catholic Alliance," "chivimbiso chakakwana" cheChristian Coalition yakagadzirirwa kukumbira maKaturike anochengetedza.
IAmerican Baptist Church yeWest West yakabudisa ungano ina dzeSan Francisco Bay kuti dzigamuchire vanoita zvechani uye kwete kudzidzisa kuti kuita zvepabonde kune chivi.
Vaparidzi muGeneral Conference yeUnited Methodist Church vakabvumira kurongedza kubvisa mutauro mumutemo wechechi inotaura kuti ungochani "hahuenderani nedzidziso dzechiKristu."
Bhishopi Fabian W. Bruskewitz weLincoln, Nebraska, akadzinga vose vaKaturike mu diocese yake avo vakaramba vari vehurumende yaakaona "inotambudza kutenda kweKaturike" - masangano akaita se Planned Parenthood uye Call to Action.
Southern Baptist Convention yakaratidza kupambwa kwepaki dzose dzeDisney nemikhiqizo nekuda kwesarudzo yekambani yekupa inshuwarfadzo kune vashandi vevashandi vegayari uye kubata "Gay Days" paDisney parks.
Svondo 27, 1996
VaTaliban vakabata kutonga kweKabul, guta guru reA Afghanistan, uye vakaturika mutungamiri wekare Najibullah.
Achifunga nezvekupomerwa kwake kwakakundikana naLarry Flynt nekuda kwemafuro Flynt akabudiswa mumagazini "Hustler," Jerry Falwell akati: "Dai Larry aive akashanda mumuviri uye akanga asiri muwiricheya, pakanga pasina mhosva. mumwe mukomana weCampbell County, Virginia, ini ndinongomutora kunze kwegorosi ndimurove uye izvo zvingava mugumo waro. "
Kuberekwa kwaDolly makwai, izvo zvakaitika chaizvo gore rapfuura, rakaparidzirwa kunyika. Dolly ndiyo yakanga iri yekutanga yekumhuka yakagadzirwa kubva kune munhu mukuru.
Imba yeVamiririri veUnited States yakasarudza 295-125 kutsigira Mutongi Roy Moore, mutongi wemo weAlabama akaramba kubvisa chirevo cheMirairo Gumi kubva muimba yake yematare. Alabama Gov. Fob James akapikira kutora National Guard nevematongerwo enyika panzvimbo pokuona kuonekwa kunouya.
Makumi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nhengo dzeboka reDenga reSango muCalifornia vakatanga kuita kuzviuraya vakawanda vachitarisira kuuya kwa comet Hale-Bopp. Kuzviuraya kwaizoitika mumapoka matatu pamusoro pemazuva matatu.
Gavhuna Fob James weAlabama akataura muDare Repamusorosoro reDare reDare reDzidziso kuti zvinyorwa zvechitendero zveChishanu Chigadziro hazvishandi kumatunhu uye, saka, hazvigone kushandiswa kuwana chero mimwe mitemo yehurumende isiri yepamutemo.
Kuti agone kubhadhara chikwereti cheRuberty University, Jerry Falwell akagamuchira $ 3.5 mamiriyoni kubva kune boka rinomiririra Sun Myung Moon. Uyu mupiro, uye maverengeka akazotevera akaitwa naJerry Falwell pamwedzi misangano, akakwidzira mashizha pakati peAmerican fundamentalists nevashumiri nokuti Mwedzi unoti ndiye mesiya akatumwa kuti apedze basa rakakundikana raJesu Kristu, dzidziso inopesana neiyo Falwell's pachake dzidziso.
Chitendero Muzvikoro Zvose: Istook inonzi yakagadziriswa shanduko yezvematongerwo enyika yakanga yapfuura nepakati pechitsimba chemukomiti, asi haina kugamuchira 2/3 vheti yakawanda yaizodiwa mumba kuti iite kuti iende kuSeneti.
Jerry Falwell akataurira pamusangano wevafundisi mukuti Anopesana naKristu ari mupenyu nhasi uye "zvechokwadi achava muJudha."
Pepanhau reJerry Falwell reNational Liberty Journal rakabudisa "kuvabereki kwekucherechedza" iyo yakanyevera kuti Tinky Winky, unhu hwevana hunoratidza "Teletubbies," inogona kuva gay.
Judy Poag (D) gwaro rinorongerwa muhurumende yeGeorgia inoda zvikoro zvepachikoro chevanhu kuti zviratidze Mirairo Gumi. Avo avo vakaramba kuita kudaro vaizopiwa chirango mari uye zvichida kunyange vane mari yavo yezvemari yakagurwa. Chimwe chikwereti chaigona kubvumira "munyengetero wakataurirwa mudzidzi muzuva rechikoro." Vadzidzisi vaizorambidzwa kubva "Kupinda mukati kana kutarisa kunyengetera kwakadaro." Pasi pemutemo uyu, mudzidzi aigona kunge achingopedzisa chikoro nemunyengetero uye achienderera mberi nekuvhiringidzika kwemaawa apo mudzidzisi aisazova nesimba rekumisa.
Chitendero Muzvikoro Zvose: MuNew Hampshire, Imba Bill 398 yakabhadharwa nevatongi vehurumende vatatu vanobvumira kuti zvikoro zvekuchikoro zviite kuti vadzidzi vanyengeterere Munyengetero waIshe wechiKristu kuchikoro. "194: 15-Munyengetero waShe, Kunyarara Kwevanhu Mumwechete uye Chibvumirano Chekuremekedza Munharaunda Yevanhu Vokutanga. Sekuenderera mberi kwemurairo wekudzidzisa nhoroondo yedu yenyika uye sekusimbisa rusununguko rwechitendero munyika muno, dunhu rechikoro anobvumira kudzokorora kwemunyengetero waIshe wekodzero uye kuvimbiswa kwekutendeseka kune mureza muzvidzidzo zvepasimhuri yepamusoro.Kuwedzerwa, chikoro chechikoro chinogona kupa mvumo kwenguva, mushure mokudzokororwa kwekunyengetera kwaShe uye kuvimbiswa kwekutenderera kumureza, Nokuda kwekunyarara kunofanirwa mumiriri wezvidzidzo zvake zvechitendero zvevadzidzi.Vadzidzi vanobatanidzwa mukudzokorora kweminyengetero uye kuvimbiswa kwekutendeseka kunofanira kuzvidira.Vadzidzi vanoyeuchidzwa kuti munyengetero waIshe ndiwo munyengetero wevapilgrim baba vedu vakayeuka pavakasvika munyika ino mu kutsvaga rusununguko.Vadzidzi vanozoziviswa kuti maitiro aya haafaniri kutaridzirwa kuti atungamirire chitendero chemunhu oga nenzira ipi zvayo . Dzidziso dzichaitwa kuitira kuti vadzidzi vazive nezvekusununguka kwedu, iyo rusununguko runosanganisira rusununguko kana chitendero uye inofananidzirwa nekudzokorora komunyengetero waIshe nezvimwe zvinoratidzika zvechitendero. "
Vakasarudza: Combs v. Central Texas Gore negore Fifth Circuit Court yakatonga kuti chechi yaisagona kutongerwa kusarurwa kwevakadzi kana musikanakadzi akadzingwa.
Hondo Yemazana E21 (2000 kusvika zvino)
Chisarudzo chakabatana cheKentucky General Assembly chakapfuura, chichida zvikoro zvehurumende muhurumende kuisa zvidzidzo pamusoro pechechi dzechiKristu pamusoro peAmerica uye kushevedza kwekuratidzwa kweMirairo Gumi muzvikoro uye ku State Capitol grounds.
Cardinal John O'Connor akafa muNew York City.
Akasarudza: Williams v. Pryor
Dare re11 Dc Court rakatonga kuti sangano reAlabama rakanga riri mukati mekodzero dzayo yekudzivisa kutengeswa kwe "zvigaro zvepabonde," uye kuti vanhu havasi ivo vane kodzero yekuzvitenga.
Mutongi Roy Moore akasarudzwa Mutongi Mukuru weAlabama Supreme Court.
Vakasarudza: Elkhart vs. Brooks
Yechitanhatu Dunhu reDare rakapa mutongo wekuti Fraternal Order yeEagles Ten Commandments mhemberero panzvimbo yeguta reIndia yakanga isiri yepamutemo.
Alabama Chief Justice Roy Moore akapika muhofisi, achivimbisa kuti "mutemo waMwari uchazogamuchirwa pachena mumatare edu."
Dare Repamusorosoro rinomira mutongo kubva ku7th Circuit Court iyo yakarambidza Indiana Gavhuna Frank O'Bannon pakuisa Mirairo Gumi pakatarisana neIndia State Capitol.
MuAfghanistan, vaTaliban vakafuridzira zvifananidzo zveBuddha zviviri zvemakore 2 000 mumatombo ari pamusoro peBamian - pasinei nekuchema kwenyika yose kwaisanganisira kunyunyuta kubva kumarudzi akasiyana-siyana echiMuslim.
Dare Repamusorosoro rinomira mutongi wechinomwe weChircuit Court iyo yakawana kuti Mutemo weChirungu weEagles Mirairo Gumi mhemberero panzvimbo yeguta reIndia yakanga isiri yepamutemo.
Akasarudza: Williams v. Lara
Dare Repamusorosoro reTexas rakasarudza kuti chikamu che "zvose" chinotenderwa nejeri chakanga chisingapindirani nemutemo, kunyange zvazvo vasungwa vakazvipira kuvapo uko kune dzimwe dzidziso dzechitendero dzakanga dzisingabatanidzwi.
Akasarudza: O'Bannon v. Indiana Civil Liberties Union
Dare Repamusorosoro rakaramba kunzwa nyaya pamusoro pechitubu chikuru muIndiana iyo ingadai yaisanganisira Mirairo Gumi. Chii chakanga chiri chekutanga chekupedzisira 7th Circuit Court, uye nei vakazosvika pakupedzisira? Izvi zvinorevei kune zvenguva yemberi?
Mutongi Roy Moore akafumura rutsoka rwakareba mana, 5,000 + pound granite yeMirairo Gumi yakaiswa mu rotunda yeAlabama Judicial Building.
Svondo 09, 2001
Jerry Falwell akati: "Sezvo Anopesana naKristu asina kuzarurirwa Jesu asati asvika, ndinotenda mamiriro ezvinhu ari kuwira munzvimbo, kureva, hurumende imwe yenyika, saka anogona kutonga nyika mushure mekuuya kwaJesu.Asi isu tiri kuenda kune imwechete- hurumende yenyika kuburikidza neUnited Nations, kuburikidza nedare renyika yose uye maonero enyika ari kukura.Dambudziko nderokuti pfungwa imwe yenyika iri kutora rutivi rwevaPalestini, kwete rutivi rwaIsraeli. "
MuUnited States, vana vaimhanyisa ndege vakapambwa nemagandanga echiMuslim uye vakanganisa kuparadza.
Svondo 13, 2001
Munguva yokutsinhanisa naPat Robertson paBlubs 700, Jerry Falwell akatsanangura zvaifunga kuti zvakakonzera kuparadza kweSeptember 11 paWorld Trade Center: "ACLU inofanira kutora mhosva zhinji yeizvi ... Uye ndinoziva kuti ini ' Uchanzwa kubva kwavari nokuda kweizvi Asi, kukanda Mwari kubudirire kuburikidza nekubatsira kwehurumende yenyika, kukanda Mwari kunze kwenzvimbo, kubva kune zvikoro.Vabortionist vanofanira kutakura mutoro kune izvi nokuti Mwari haazovi uye patinoparadza mamiriyoni makumi mana vana vasina mhosva, tinoita kuti Mwari ashatire. Ndinotenda chaizvo kuti vahedheni, uye vanobortionists, uye vakadzi, uye vanoita zvevakomana nevadzidzisi vanoedza kushingaira kuti vaite mararamiro mamwe mararamiro, ACLU, Vanhu veAmerica Way - vose avo vakaedza kuunza America - Ndinoisa munwe mumeso avo ndokuti: "Makabatsira izvi kuitika." "Pat Robertson akabvumirana nemashoko aya, asi akazobva avasiya.
Gumiguru 30, 2001
Mhosva dzaipomerwa nekuda kwevatongi vematare vatatu vakatsvaga kubviswa kweRoy Moore's Ten Commandments chivako cheAlabama Judicial Building. Sutu yakataura kuti chivigiro "chinogamuchirwa chisingaitiki chechitendero nehurumende."
Mumwe mukadzi wemakore makumi maviri nemashanu akazova mukadzi wokutanga wePalestine kuzviuraya paakazviwisira mumugwagwa weJerusarema, achiuraya munhu mumwe uye akakuvadza vamwe zana.
Kutaura pamberi peNational Broadcastters Convention muNashville, Tennessee, Attorney General John Ashcroft akati "Vanhu vakabudirira - VaMuslim, vaKristu nevaJudha - vose vanonzwisisa kuti zvinobva pakusununguka nekuremekedzwa kwevanhu ndiye Musiki.Vasimudziri vezvitendero zvose vanonzi kune kuzvidzivirira kwezvisikwa zvake, "zvinoreva kuti hakuna Mwari. zvinongoramba zvisiri kubudirira.
Pane purogiramu yake ye "700 Club", Pat Robertson akataura kuti Islam "... isiri chitendero chine rugare chinoda kugara pamwe chete. Vanoda kugara pamwe kusvikira vazokwanisa kudzora, kutonga uye kana zvichidikanwa kuparadza."
MuMisissippi, "George County Times" yakabudisa tsamba kubva kuGeorge County Justice Court Mutongi Connie Wilkerson uyo akaverenga, muchidimbu, "Maonero angu, varume vanoita zvepabonde nevadzidzisi vanofanirwa kuiswa mune chimwe chimiro chepfungwa." Nemhaka yekusarura kunoratidzwa mumashoko akadaro, kukanganisa kwemitemo kwakagadzirirwa Wilkerson.
Saronga: Watchtower Society v. Village yeStatton
Ko vanhu vanofanira kuenda pasuwo neimba kune kukumbira, kukumbira, nezvimwewo zvinotarisirwa kuwana mvumo kutanga here? Iko Zvapupu zvaJehovha hazvifungi saizvozvo, uye zvinopikisa mutemo wakadaro muMusha weStatton, Ohio. Yechitanhatu Dunhu reDare rakasarudza kurwisana navo, asi nyaya yacho ichakurumidza kusarudzwa neDare Repamusoro.
Mutongi weUtah akawana Mormon mutambamende Tom Green ane mhosva yekupamba Linda Kunz, mwana waakaroora paaiva nemakore gumi nemasere uye aiva nemakore makumi matatu nemaviri.
Payona: MaMormon anoyeuka kugadzirisa kwekutanga mu Salt Salt nzvimbo naBrigham Young.
Mutongi weDunhu reU.S. Myron Thompson weMontgomery, Alabama, akarayira kubviswa kwechikumbaridzo cheRoy Moore's Ten Commandments, achiona kuti yakakanganisa kubvumwa kwebumbiro kune hurumende yekugadzirisa chitendero. Thompson akanyora mukusarudza kwake kuti "Gumi reMirairo yeGumi, rinoonekwa roga kana mumamiriro ezvinyorwa zvaro, kugadziriswa, uye nzvimbo, rine chikonzero chikuru chekutsigira chitendero."
Televangelist Pat Robertson akaratidza kuti aiva nekenza yeprostate uye aizovhiyiwa.
David Wayne Hull, mutungamiri weKu Klux Klan muPennsylvania uye anodzidzisa weChristian Identity, akasungwa nekuda kwekugadzirira kuputira makiriniki.
United States Representative Lucas wokuK Oklahoma akazivisa House Joint Resolution 27 iyo yaizowedzera kuchinjwa kweUnited States Constitution inotaura kuti haisi "kusungirirwa kwechitendero chevadzidzisi muchikoro chevanhu vose kuti vadzokere, kana kuti kutungamira vadzidzi vanoda mukutaura" Chibvumirano Chekuremekedza kana ine mutsara we "pasi paMwari." Izvi zvaive zvakagamuchirwa kuti Mutemo weBumbiro, sezvo unomiririra, haubvumiri kudzokorora kwakadaro.
IUnited States Senate yakasarudza 94-0 kuti "zvakasimba" isingabvumirwi nesarudzo yechitanhatu yeDecteur Court of Appeals kuti irege kufungisisa kutonga kwayo kuti kuwedzerwa kwechikamu "pasi paMwari" kune The Pledge of Adlegiance kwakanga kusina mutemo.
Muchechibhishopi weKaturike Oscar Lipscomb weMobile, Alabama archdiocese akabvuma kuti akabvumira Rev. J. Alexander Sherlock kuti arambe ari mupurupiti pachechi muMontgomery kunyange mushure mokunge avabvuma muna 1998 kuti vaite zvepabonde kune mukomana wechidiki muma1970.
Kutaura pamusoro peClub 700, Pat Robertson akaratidza kutsigira kwake kwekuparadzanisa kereke nehurumende apo "chechi" iri mubvunzo yaisanganisira imwe chitendero kunze kwechiKristu: "Kana United States ichiedza nyika kuvaka [muIraq], inofanira kuva ] kune imwe nzvimbo yepamusoro-soro yekuparadzaniswa kwechechi nehurumende. Inofanira kuva nehurumende munyika iyo [Iraq] uye kwete yeIslamic state ... Saka zvichava zvakakosha kuisa mutemo uye kuchengetedza vanoti tichachengetedza nyika ... "
IUnited States House of Representatives yakasarudza 400-7 kutongesa chisarudzo chechitanhatu cheDunhu reDare reKutsvaga chisingafungi zvakare chirevo chayo chokuti kuwedzera kwechikamu "pasi paMwari" kune The Pledge of Allegiance kwakanga kusina mutemo. Vane vanomwe vakapikisana nechisarudzo chacho vaiva vose veDemocrats.
Munenge muna 2:30 GMT United States inotanga kupindira kweIraq kuburikidza nekutanga mhirizhonga yemhepo pamusoro peBaghdad mune tarisiro yekukurumidza kuuraya vatungamiri vehurumende yeIraqi nekudzinga Saddam Hussein nehurumende yeBaathist kamwe chete.
Bhoston Globe inobata Pulizter Prize yeVashandi vehuruzhinji kwezvikamu zvakatevedzana zvinyorwa zvinoratidza kuvharwa kwezvikwata zvakapararira zvekushungurudzwa kwepabonde nevapristi veBoston Archdiocese. Izvi zvinovhura musuo kune mazana emhosva dzemhosva pamakore gumi anotevera.
Sangano reNational Association of Evangelicals, boka revaevhangeri dzevaKristu, rakapa mhosva Franklin Graham, Jerry Falwell, Jerry Vines, Pat Robertson nevamwe vatungamiri veevhangeri nekuda kwemashoko avo akawanda anorwa neIslam.
Vatongi vatatu-vatongi ve 11th States US Circuit Court of Appeals vakabvumirana kubvunzwa kubva kuna Roy Moore mukuedza kwake kuchengeta mirairo yake Gumi chivako mu rotunda yeAlabama Judicial Building. Dare rakarangarira kuti chii chingaitika kana chivakwa chichibvumirwa: "Chivako chehurumende yose chinogona kuva nemuchinjikwa, kana manorah, kana chifananidzo chaBuddha, zvichienderana nemaonero evakuru vane simba pamusoro peimba."
Gene Robinson, murume akazvinyengedza gayana, akasarudzwa bhishopu-ainzi New Hampshire neEpiscopal General Convention pamusangano wavo muMinneapolis. Chisarudzo ichi chakaita kuti kutsamwa kweAnglican Churches pasi pose kuve kwakagadziriswa uye kwakatangira kufamba kunopesana mukati meEpiscopal Church uye maitiro akachengetedza, evangelical akaedza kuzviparadzanisa ivo kubva hutungamiri hwavanonzwa kuti vakanga vauya muupengo.
Iyi ndiyo nguva yakatarwa naRoy Moore kuti vabvise chirevo chake cheMirairo Gumi kubva ku rotunda yeAlabama Judicial Building, asi akaramba kuita. Boka revanhu vanotsigira chivimbiso rinokura pachivako kwemazuva mazhinji uye vamwe vakasungwa nekuda kwekusiya chivako.
Nemhaka yokuti Roy Moore akaramba kubvisa chirevo chake cheGumi Gumi nemusi wekupedzisira weAugust 20, avo vevamwe vatongi veAlabama Supreme Court vakabvumirana pamwe chete Moore uye vakaraira chivigiso chakabviswa nemukuru wechivako. Vatongi vasere vakanyora kuti "vakasungirwa nemhiko yekutevera mutemo, kana vachibvumirana kana vasingabvumirane nayo."
Nemhaka yokuti Roy Moore haana kuteerera mutemo wehurumende kuti abvise chirevo chake cheMitemo ineGumi, hurumende yeRussia Inquiry Commission yakamhan'arira Moore nekuputsa matanho matanhatu emitemo uye yakamiswa nebhadharo ichimirira kutongwa pamberi peAlabama Court of the Judiciary.
Alabama Chief Justice Moore akamira pamusana pokuramba kwake chiyeuchidzo cheMitemo Gumi kubva kuRorunda yeAlabama Judicial Building.
Vatsigiri veRoy Moore's Ten Commandments mhemberero vakaisa chikwata mumatare ehurumende mu Mobile kuti vaedze kudzivisa chivako chacho. Yakaiswa panzvimbo yevagari vaviri veAlabama vanotsanangurwa sevaKristu vanotenda "United States yakavakwa paJesu Kristu" uye rusununguko rwekunamata rwuri kuputswa.
Chirevo cheRoy Moore chaGumi Mirairo chakave chichibva kunze kweRondunda yeAlabama Judicial Building kuti iite maererano nedare rehurumende rinorayira.
Nhasi 03, 2003
Rev. Paul Hill akaurayiwa neHurumende yeFlorida nokuda kwekuuraya kwaJohn Britton, mumwe chiremba, uye James Barrett, mukuru weuto rekurasikirwa, sezvavakanga vachipinda MuLadies Center muPensacola, Florida, uko Britton akabvisa pamuviri.
Pamusoro pepurogiramu yemashoko Cross Cross, Jerry Falwell akatsanangura kuti Mwari ndiye aikonzera sarudzo uyezve kusarudzwa kweMutungamiri Clinton. Chikonzero: "Ndinofunga kuti taida Bill Clinton, nokuti takafuratira Ishe uye taida Mutungamiri akaipa kuti tinyatsocherechedza zvakare Kunyengeterera Mutungamiri akanaka, ndizvo zvandinotenda."
Dare Repamusorosoro reUnited States rakaramba kunzwa chikumbiro cheAlambama Supreme Court Mutongi Roy Roy Moore, achitsigira mutongi weDunhu reU.S. Myron Thompson kuti aite chibvumirano cheMorell cheMirairo Gumi. "Hurumende haigoni kubvuma uchangamire hweJudhiya-yechiKristu uye inotaura kuti Mwari ndiye rusununguko rwechitendero," akanyora Mutongi Thompson mumutongo wake.
An Alabama hutungamiri hwematongerwo enyika hutungamiri hwakatonga kuti apo Mutongi Mukuru Roy Moore akashora mutongi wehurumende kuti atakure dombo reMirayiro Gumi kubva muhurumende yezvekutonga, akatyora mitemo yepamutemo yepamutemo. Somugumisiro, akabviswa kubva kuhofisi yake yeMutongi Mukuru weAlabama Supreme Court.
Dare reAlabama Court of Judiciary rakabvisa Alabama Chief Justice Roy Moore kubva panzvimbo yake yakasarudzwa nokuti yakaramba kutevera Mutongi Weruwa reU.S. Myron Thompson mutemo wokubvisa chirevo cheMirairo Gumi kubva kuRorunda yeAlabama Judicial Building.
MuGoodridge v. Dept. yePublic Health case, Supreme Court yakatora kuti varume vakomana nemurume mumwe chete vane kodzero yekuroorwa.
Bhishopi Thomas O'Brien, aimbova mukuru weArizona guru pane reRoma Catholic diocese, akatongerwa mhosva nekumhanya. Saka akava mushumiri wekutanga weChechi yeRoma muUnited States kuti atongorwe mhosva.
Maererano nekuongororwa kweCNN, vana vakapa zvinopfuura 11 000 zvekurwiswa kwepabonde nevapristi vechiKaturike. Vapristi 4 450 vanobatanidzwa vanoumba vanenge 4 muzana vevapristi vane 110 000 vakashanda mumakore 52 akafukidzirwa nekudzidza.
Mel Gibson inopikisana nepepeti "Passion of Christ" inotanga mumitambo muAmerica.
Mumwe mushumiri wevabatsiri muBothell, Washington, akaregererwa nejeri rechechi yeMethodist rokuputsa mitemo yechechi.
Massachusetts yakava nyika yekutanga yeUnited States kuti iite mutemo wekuroorana kwepabonde imwechete. Mvumo yekuroorana yekutanga yakabhadharwa kune imwechete yepabonde nemudzimai zuva rimwechete
Papa Benedict XVI, akaberekwa Joseph Aloisius Ratzinger akava Papa 265 weCathrolic Church.
Svondo 30, 2005
Pepanhau reDanish rinonzi Jyllands-Posten rakabudisa mapikicha gumi nematanhatu ekunyora, mazhinji ayo akarondedzera Muhammad, chiremera chikuru chechitendero cheIslam, achitungamirira mapoka echiMuslim muDenmark achinyunyuta.
Iyo firimu yakashandurwa naDan Brown's inovheti The Davinci Code yakasunungurwa, iyo yakarongerwa kuti Jesu Kristu naMariya Magadharene vakanga vakaroorana uye vaiva nevana. Izvi zvakakonzera kutsamwa nemaKristu mazhinji muUnited States uye pasi rose.
Jerry Falwell, mutungamiri weboka rezvematongerwe enyika revaKristu vanochengetedza vanozivikanwa seMoral Majority, vakafa muLynchburg, VA.
Chiratidziro chine rugare nemamongi eBuddhist kana Lhasa, Tibet yakava mhirizhonga yakauraya vanhu gumi nemasere apo mapurisa akatsigirwa nehurumende yeChina akavhiringidza kuratidzwa. Izvi zvingatungamirira kumakwikwi emhirizhonga anopesana neChina muTibet uye pakupedzisira nyika, kusanganisira US
Dale Neumann, uye gare gare mudzimai wake Leilani Neuman, akatongerwa mhosva yekuuraya muWisconsin mushure mokunge mwanasikana wavo afa pavakatsvaka kutenda-kuporesa panzvimbo pokurapa kwemamiriro ake ezvinhu. Kutenda kwevaPentekosti vaviri vakagadzwa zvakare neDare Repamusorosoro
Zviuru zvevapanduki veMuslim muStartown Manhattan vanounganidza kupikisa kuzarurirwa kwemu musikiti pedyo nenzvimbo yekuparadzwa kwe 9/11/2001 kwenyika yezvematengesi emasvingo anoshongedzwa neMuslim.
Mitt Romney akazivisa kubvumirana kwake kwehukuru hwehurumende yeUnited States, achiva wekutanga Morman kumhanyira Mutungamiri.
Satirical pepanhau Charlie Hebdo yakanga ichitsvaga kuputira Mohammad, zvichiita kuti kukurukurirana kukuru kuUnited States kwekusununguka-kutaura-kutaura nechitendero mharo.
Barack Obama akava mutevedzeri wokutanga weUnited States kuti ataure sangano rekugadzirisa kuroorana kwevanhukadzi.
Maine, Maryland, neWashington vanove \_ vekutanga vanotaura kuti vanoita zvepamutemo kuroorana kwepabonde imwechete kuburikidza nevhoti yakakurumbira.
Papa Francis, akaberekerwa Jorge Mario Bergoglio, akava Papa 266 weChechi yeKaturike.
Fred Phelps akafa nezvikonzero zvinokonzera nguva pfupi asati apfuura pakati peusiku musi waMarch 19, 2014. Phelps ndiye mutungamiri anozivikanwa weWestboro Baptist Church weTopeka, Kansas, akakurumbira kuburikidza nehuwandu hwevanhu uye hunovhiringidzika uye huchani.
Vatungamiri vaviri veAslamist vakamanikidzira kupinda muzinda weParis weCharlie Hebdo ndokupfura kuuraya vashandi vane gumi nevaviri sekudzorera kwegore remapepanhau rekusagadzikana kwemuporofita Mohammed.
Dare Repamusorosoro reUnited States, mukudzokorora kwezviitiko zvina zvakasiyana, rakatonga kuti nyika hadzina kodzero yekuita zvepabonde zvekuita zvepabonde imwechete, nekugadzirisa kuita zvepabonde kuroorana kwepamutemo kudarika US
Minnesota yakava musha wekutanga kweSataniki chivakwa chakagadzirwa nepamusoro pezvivako zvepaguta muguta re Belle Plaine, uko vakuru vakuru vakasarudza nzvimbo kuti vasunungure kutaura.
Maonero eFossil Evidence Anotsigira Kushanduka-shanduka
Nhanganyaya kuLinic uye Arguments
Ko Albert Einstein Akatenda Muupenyu Pashure Kokufa?
Kubvisa pamuviri nechitendero
Mutauro, zvinoreva, uye Kutaurirana
Kubvuma Mukushanduka-shanduka Kunoda Kudavira Here?
Chii chinonzi Aesthetics? Philosophy yeAkadhi, Runako, Kuona
Kutsvaga Sartre's Existentialist Zvidzidzo paKutenda Kwakashata uye Kuwa
Mictlantecuhtli - Mwari Wekufa muAztec Chitendero
Tinokuda Iwe Xmas Isingadi Mwari: Chii Chisingatauri, Vasingadi Mwari Nezororo reKrisimasi?
Kuchinja-chinja kwemhepo vs. Kurwisa kweMacroevolution: Chii chakasiyana?
Monologues Zvinomwe zveVasikana Vechidiki
Chii chinonzi Segulah?
Sa Jodi Picoult? Zvadaro Edza Aya mabhuku
7 Mafirimu Emitambo Anotarisana naGregory Peck
Kunyora Kudzidzisa Hurukuro Hurukuro Nhamba
Nzira 3 dzekuputira Gore reChikoro cheZvakaitika Gore Rinozoitika
Mitsara yeItaly nemashoko Akashandisa Verb Fare
Vakadzi neHondo Yenyika II: Makamu Okumanikidza
Mushandirapamwe Wokucheka Mitsetse: Mungawana Sei Mavharo Akavanzwa
Crucigramas: Ita Crossword Puzzles yeClass Your Class
Tsanangudzo uye Mienzaniso Yemashoko Okupomera muChirungu
Chii Chisiyana Pakati Pakuremara neMisa?
Mutungamiri weMutangisi weMitambo yevaJudha uye Imba
Kukosha Kwekuzvifungidzira Kwekubudirira Mukudzidzisa
Hondo yeSpain-America: USS Maine Explosion
Crystal Eastman, Mushandi
Kufambisa Ndekwokutanga kweAmerica uye Hondo Yenyika I
Hofstra University GPA, SAT uye ACT Data
Purogiramu Yokutengeserana yeIndamende Inotora
Pasi Pasi Gadziriro yeCommunist?
Dzorerai Mudzidzisi Wenyu Utera Hwokuva Mufumi uye Nail Job Job Interview
Top Top 10 Jon Jones Kukunda
10 Chimiro Chemistry Ongororo
Marc Blucas Anotaura Nezvo "Mwanasikana Wokutanga"